Birds – Myanmar Biodiversity
There are 47 Globally Threatened bird species in Myanmar with seven listed as Critically Endangered. Two of these species are probably extinct in the country, of which one is possibly globally so. The formerly widespread White-shouldered Ibis Pseudibis davisoni has not been seen in Myanmar since the 1940s (Birdlife International 2012). The Pink-headed Duck Rhodonessa [...]
ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း(၇၀)ခန့်တွင် ရှားပါးကြိုးကြာငှက်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းရေးဟောပြောမည်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ မြို့နယ်(၄)မြို့နယ်အတွင်းမှ ကျေးရွာပေါင်း (၇၀)ခန့်တွင် ရှားပါးကြိုးကြာငှက်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းရေးဟောပြောမူများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ မအူပင်မြို့နယ်၊ ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ ၀ါးခယ်မမြို့နယ်နှင့် အိမ်မဲမြို့ နယ် စသော မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၇၀ခန့်တွင် သစ်တောဦးစီဌာန၊ မိန်းမလှကျွန်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တောက တာဝန်ရှိသူများ၊ မအူပင်တက္ကသိုလ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီဌာန နှင့် သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (မြန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ်)တို့ ပူးပေါင်း၍ ယင်းဒေသတွင် ပျံနှံနေထိုင်ကြသော ကြိုးကြာငှက်များနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး ဟောပြောသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိန်းမလှကျွန်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဇော်ထူးအောင်က ပြောသည်။ “သူတို့ကျင်လည်ကျက်စားတဲ့ ကျေးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းရေးတွေမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လာဖို့ အသိပညာပေးဟောပြောဖို့ ရှိပါတယ်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံပြည်သူတွေ အသိပညာတိုးလာအောင် ဘာကြောင့် ကာကွယ်ရတယ်၊ ဘယ်လိုဥပဒေေ တွနဲ့ ကာကွယ်ထားတယ်။ဥပဒေအရ ဘယ်လိုကာကွယ်ထားသလဲဆိုရာမှာ [...]
By Swe Zin Myo Win| 2017-07-17T12:12:54+00:00	July 17th, 2017|Upper Ayeyawady, Birds, Reptiles, WCS Myanmar|0 Comments
Myanmar (20/06/16) - Experts from (WCS) Wildlife Conservation Society and the National University of Singapore (NUS) have madeasurprising discovery that could subvert the significance of traditional criteria used for species classification. Employing novel techniques to retrieve DNA sequences from thousands of genomic locations, the researchers were able to uncover an unusual case of [...]
By rwong| 2017-05-19T09:58:11+00:00	June 24th, 2016|News Blogs, Wildlife, Ayeyawady River, Birds, WCS Myanmar|0 Comments
Avifauna in Myanmar
There are 47 Globally Threatened bird species in Myanmar with7listed as Critically Endangered. Two of these species are probably extinct in the country, of which one is possibly globally so. The formerly widespread White-shouldered Ibis Pseudibis davisoni has not been seen in Myanmar since the 1940s (Birdlife International 2012). The Pink-headed Duck Rhodonessa [...]
By rwong| 2017-05-19T09:58:12+00:00	December 3rd, 2015|Wildlife, Birds|0 Comments
YANGON (MARCH 5, 2015) – A scientific team from WCS, Myanmar’s Nature and Wildlife Conservation Division – MOECAF, and National University of Singapore (NUS) has rediscoveredabird previously thought to be extinct. Jerdon’s babbler (Chrysomma altirostre) had not been seen in Myanmar since July 1941, where it was last found in grasslands near the [...]